असोज, ८ ।
रुकुम(पश्चिम)को आठबीसकोट नगर अस्पतालले आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको २५ शैयाको आठबीसकोट नगर अस्पतालले आईतबारबाट सेवा सुरु गरेको हो ।
अस्पतालले विभिन्न सेवाहरु प्रवाह गर्न सुरु गरेको छ । नगर प्रमुख गोर्खवहादुर केसीका अनुसार पहिलो दिन १ सय १६ जना विरामिले सेवा लिएका छन् । अस्पतालबाट एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, ल्याब टेस्ट, फार्मेसी, इसिजि, प्रसुति सहितका २५ शैंयाको अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरु प्रवाह भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अस्पतालमा एम्बुलेन्स सेवा समेत उपलब्ध छ । अस्पतालमा डा. दिल शाही रोका सहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सेवा दिईरहेका छन् । नगरको आग्रहमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस डा. रोकालाई अस्पतालमा पठाएको हो । त्यस्तै नगरले अस्पतालका लागि २० जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।
दुई जना हेल्थ असिष्टेन्ट, दुई जना स्टाफ नर्स, दुई जना अहेव, पाँच जना अनमी, ल्याब टेक्निसियन र ल्याब असिष्टेन्ट एक÷एक जना, रेडियो ग्राफर एक जना, रिसेप्सनिष्ट दुई जना र स्विपर चार जना गरी २० जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो ।
अस्पतालले सेवा सुरु गरेपनि औपचारिक उद्घाटन हुन बाँकी रहेको छ । उद्घाटनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र यसै साता सम्म अस्पतालको उद्घाटन हुने नगरप्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो ।
‘अस्पतालको उद्घाटनका लागि केहि दिन लाग्ने देखियो, नगर प्रमुख केसीले भन्नुभयो –हाम्रो सबै तयारी पुरा भैसकेको थियो, त्यसैले सेवा सुरु गरिसकेका छौं, अस्पतालको असोज १२ गते उद्घाटन गर्ने गरी तयारी भैरहेको छ ।’ नगरवासीलाई नगरपालिका भित्रै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिने उद्ेश्यले अस्पताल संचालनमा ल्याईएको उहाँको भनाई छ ।